Archive du 20200608
Nidangana ny isa ho an’Antananarivo Niampy 2 ny matin’ny coronavirus
Niampy roa ireo namoy ny ainy vokatry ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara.
Alban Rakotoarisoa Nanakiana mafy dia mafy an-dRajoelina
Tapitra ny 100 andro, efa fanovana governemanta fanintelony na faninefany no nisy, kanefa nireharehany ny hoe hitady “cerveaux” na avy eto an-toerana na avy any ivelany, ka tsy nisy “cerveau” daholo ve ireo tao ireo?
Fanakianana ny fanjakana Rajoelina Nadoboka eny Antanimora i Berija
Nadoboka am-ponja vonjimaika eny Antanimora ny sabotsy lasa i Berija Ravelomanantsoa taorian’ny fitazonana azy teny amin’ny Borigady misahana ny heloka bevava eny Fiadanana nanomboka ny alahady 31 mey lasa teo.
Antoko Fanorolahy Ny ady amin’ny coronavirus izao no tena maika
Ny ady amin’ny fahavalo iombonana dia ny coronavirus amin’izao no tena maika ho an’ny antoko Fanorolahy, tarihin’ny filoha nasionaliny JoséRandrianary.
Depiote Naivo Raholdina Lasa mpamono afon’ny fitondrana
Tsapa indray tato ato fa ampiasain’ny fitondrana hamono afo fotsiny ny Solombavam-bahoakan’ny Boriborintany faha-5 Naivo Raholdina.
Antananarivo renivohitra Miverina amin’ny laonina ny fiainana…
Efa azo ambara ho miverina amin’ny laoniny ny fiainan’ireo mponina eto Antananarivo renivohitra, raha mijery ny zava-mitranga eny amin’ny
COI Nahemotra ny fihaonambe amin` ny 25 jona
Fotoan-dehibe hafa foana indray. Nisy ny filankevitry ny ministra mpikambana eo anivon` ny vaomieran` ny Ranomasimbe Indianina (COI) ny zoma lasa teo ka tapaka fa hahemotra amin` ny fotoana manaraka ny fihaonamben` ireo filoham-pirenena sy governemanta, andiany fahadimy,
Ampamoaka any anaty gazety Mifampitady i Lola R sy Lalatiana A
Vaky ny ady eo amin’ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina, Lalatiana Andriatongarivo, sy ny mpanolontsain’ny minisitry ny tetibola, Lola Rasoamaharo.
Tsy maha taitra intsony
Efa tsy maha taitra intsony ny fiarahamonina Malagasy amin’ny ankapobeny ny fanapahan-kevitra raisin’ny fitondram-panjakana ao anatin’izao hahamehana ara-pahasalamana izao.
Mpianaka voadonan’ny kamiao Niparitaka ny atidohan’ilay zaza
Lozam-piarakodia mahatsiravina no nitranga teny Avaradoha, akaikin’ny Institut Pasteur, ny sabotsy teo,
Ranomasimbe Indianina Hamporisihana hanjifa ny « Vita Malagasy»
Nandritra ny fivorian` ny filankevitry ny ministra eo anivon` ny COI ny zoma lasa teo dia nanao ny tatitra momba ny ezaka nataon` i Madagasikara tamin` ny ady amin` ny “coronavirus” ny ministry ny raharaham-bahiny, Tehindrazanarivelo Djacoba A. S. Liva.
Jean Eric Rakotoarisoa “Hajao Andriamanitra, hajao ny Razanao!”
Misy zavatra iray tsara ho fantatrareo. Ireo izay mahalala ny tantaran’i Madagasikara, ny tantara tena izy fa tsy ny tantara ôfisialy, dia mahafantatra fa ity taona 2018 ity dia fotoana tokony hamerenana ny hasim-piandrianan’ny Fanjakana Malagasy very sy novonoina ary nofafàna tamin’ny fanjanahantany.
Misaona ny tontolon’ny sarimihetsika Nodimandry i Thomas Raoelijaona
Misaona ny tontolon’ny sarimihetsika Malagasy satria dia nodimandry ny marainan’ny sabotsy teo ny mpilalao sarimihetsika,
Fananganan-tsaina Maro no tsy mivaky loha intsony
Vanim-potoana miavaka ho an’ny firenena Malagasy ny volana jona hisian’ny fananganan-tsaina noho izy manamarika ny fetim-pirenena. Tsikaritra amin’izao fotoana izao fa maro ny trano sy tokantrano tsy marisika sy tsy mahatsapa tena.
Fampiatoana ny «Tanàmasoandro » Nifaly ny mponin’Ambohitrimanjaka
Naneho ny hafaliany teo anatrehan’ny fiovan-kevitry ny fanjakana amin’ny fanatanterahana ny tetikasa Tanàmasoandro eny Ambohitrimanjaka ny mponina ny sabotsy teo.
Malagasy niasa tany Koweit Ho tonga eny Ivato anio
Anisan` ireo Malagasy misedra fahasahiranana taorian` ny fampiatoana ny sidina ana habakabaka sy an-dranomasina ireo nila ravinahitra tany Koweit.
Tsiroanomandidy Nodorana velona niaraka tamin’ny zafikeliny ilay dadabe
Efa tena mivadika ho biby ny olombelona. Dadabe iray niaraka tamin’ny zafikeliny roa tany Iaboketraka atsinanana kaominina ambanivohitra Ambararatabe distrikan’i Tsiroanomandidy ny alarobia lasa teo no nodoran’ny vinantolahiny velona tao an-tranony.
Malagasy tavela any ivelany Miomana hampody azy ireo ny fanjakana
Namoaka fampitam-baovao omaly ny avy eo anivon’ny minisiteran’ny raharaham-bahiny Malagasy fa hampody ireo Malagasy any ivelany maniry ny hiverina an-tanindrazana.
Maternité Alasora Nozaraina couette ireo reny vao tera-bao
Noho ny fatongavan'ny fetin’ny reny omaly alahady 07 Jona dia tonga niarahaba ireo reny vao tera-bao tao amin’ny maternité
Vehivavy mpitandro filaminana ao Toamasina Nizara voninkazo sy arotava tamin’ny vahoaka
Tsy nanadino ny mponina ao Toamasina ireo vehivavy mpitandro ny filaminana any an-toerana omaly alahady nankalazana ny fetin’ny reny.
Imerinafovoany Talatamaty Raikitra ihany koa ny ankisisika Tosika fameno
Nitohy ny ankisisika Tosika fameno toy ireo efa fahita tamina fokontany samihafa hatramin’ny niatombohan’izao hahamehana ara-pahasalamana izao,
Mpampianatra Fram maty tany Ihosy Iray andro maninjitra vao vita ny taratasy hitondrana azy mody
Mpampianatra Fram iray miasa ao Ihosy ny maty tampoka noho ny fiakaran’ny tosi-dràny naheno fa anisan’ireo tafiditra ho voaray ho mpisam-panjakana izy tamin’ny herinandro lasa teo (alakamisy 04 jona 2020).
Sakafo madio sy ara-pahasalamana Mbola mila ezaka be i Madagasikara
Hitarafana ny fandrosoan’ny firenena iray ny fananany sakafo madio sy ara-pahasalamana. Raha ny eto amin’ny firenena dia mbola mila ezaka be ny fanarahana ny fenitry ny sakafo ara-pahasalamana
Ady atao amin’ny Covid 19 Mitaky fanadihadiana parlemantera ny HVM
Miantso fanadihadiana parlemantera mikasika ny fitantanana ny ady atao amin’ny valanaretina coronavirus ny antoko HVM. Mangataka ihany ny mangarahara mahakasika ny tambavy CVO sy ny tsindrona ity antoko ity.
Ambatondrazaka Nohenjanina ny fepetra amin’ny fihibohana
Mitohy ny asa ataorehetra any Ambatondrazaka Faritra Alaotra Mangoro toy ny fanamboarana ny RN 44 sy ny ao Manainga Zipo manokana ary ny